Home Wararka Fadeexo iyo ceeb ka dhalatay Safiirka India oo marti u ahaa dowlada...
Fadeexo iyo ceeb ka dhalatay Safiirka India oo marti u ahaa dowlada Soomaaliya! (Aqriso Dukumintiga)
Dowlada Indiaayaa waxa ay u soo magacaawaday Soomaaliya Safiir cusub, Safiirka Cusub oo lagu magacaabo Mudane Rahul Chabbraayaa waraaqihiisa aqoonsida u gudbiyay Madaxweynaha Soomaliya Bishaa Feberaayo 14keedii.
Safaarka cusub ee India ayaa VISAHA dal ku galka ah waxa uu ka soo qaatay Safaarada Soomaaliya isaga oo buuxiyay dhamaan Sharuudihii laga rabay.
Dhanka kale Dowlada Indiaayaa waxa ay xiriir la soo sameeysay Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Soomaaliya iyada oo la socodsiisay in Safiirka Cusub u imaan doono dalka Soomaaliya isaga oo wata VISA dalka ku gal ah si uu ugu wareejiyo waraaqihiisa aqoonsiga Madaxweynaha Soomaaliya.
Hadaba maxaa ka dhacay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cade maalintii Arbacada ee bisha Feberaayo ahayd 13ka
Iyada oo la tixraacayo xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya ladaba dal ee India iyo Soomaaliya iyo isweydaarsi qoraalada diblomaasiyada oo rasmi ah ayaa dowladdaa India waxa ay Visa-ha dal ku galka ah ay ka ka dalbatay kana soo qaadatay Safaarada Soomaaliya.
Qoraal ay soo qoratay Dowlada Indiaayaa ay ku sheegtay in Safiirka India imaan doono magaalada Muqadishu 13ka Bisha Feberaayo si Wasaaraada Arimaha Dibadda ula wareegto qaabilaada iyo baratakoolka safirika inta uu ku sugan yahay dalka Soomaaliya maadaama uu marti u yahay Wasaaraada Arimaha Dibada ee Soomaaliya isla markaana ay la balan san yihiin Madaxweyne Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo
Bishii Feberaayo 13keedii ayaa Safiirka Cusub waxaa uu ka soo dagay Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan isaga oo wato VISA-ha dal ku gal ah ee uu ka soo qaatay Saraadda Soomaaliya
Markii u ka soo degay garoonka ayaa waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha waxa ay u sheegtaysafiirka in VISA uu wataa uu yahay mid aan waxba ja jirin isla markaana uu dalkiisa dib ugu laabto oo ayan ka tagin diyaaradii uu ku yimid.
Safiirka Indiaayaa waxa ay ku noqotay yaab iyo amakaag in VISA-ha Safaarad Soomaaliya soo siisay la diido oo la aqabali waayo, waliba iyada oo lacag laga soo qaaday. Hadii xataa VISA-ha uu wataa aan la aqoonsanaynin maxaa keenay in Waaxda socdaalka iyo Jinsiyaddaha ay sharafta safiirka meel uga dhacaan oo ay yiraahdaan dalka aad ka timid ku noqo iyada oo Wasaaradii martiqaaday ay ku sugan tahay Garoonka Diyaaraha.
Markii mudo sacaado ah lagu yahay safiirka garoonka diyaraadaha ayaa ugu danbeeytii Saraakiisha Wasaaraada Arimaha Dibada oo uu ku jiro wasiirka waxaa ay ku qanciyeen Waaxda Socdaalka in ay sii daayaan Safiirka si uu waajibkii uu ugu yimid dalka uu u guto.
Waxaa nasiib xumo ah in fadeexad intaa la eg ay ka dhacdo dalka gudihiisa isla markaana Wasaaradii arintaan u xil saarnayd ay ku fashilantay in ay difaacdo sharaftii Soomaaliya. Sidee bay suuragal ku tahay in la isku dayo in safiir marti u ah Soomaaliya oo soo buuxiyay sharuudiii laga rabay, wato VISA si rasmi ah uu uga soo qaatay Safaarada Soomaaliya oo hoos timaada Wasaaradda Arimada Dibadda hadana loo diido in uu dalka Soo galo.
Waxaa taa ka sii diran waa safiir cusub oo u yimid in uu waraaqihiisii aqoonsiga u gudbiyo Madaxweynaha Soomaaliya oo balan looga dhigay xilila joogo dhowr bilood.
Ma aha markii ugu horeeysay oo adhacdo noocaan oo kale ah ay ka dhacdo dalka d gudihiisa. Waxaa horay loo masaafuriyay dhaqaatiir India ka timid oo haysta deganaanshada Soomaaliya si sharci ahna dalka ku joogaan.
Dalkaan yaa u taliya? Halkee laga xukumaa? Tani waxa ay ka tarjumeysaa Burburka ku yimid Wasaaradda Arimaha Dibadda iyo hogaankeedaba. Waxaa kaloo ay muujinaysaa in dowladnimadii Soomaaliya ay ceel ku sii dhaceyso.
Dowlada Soomaaliya waxa la gudboon in ay qoraal raali galin ah ay u dirto dalka India isla markaana talaabo laga qaado shaqsiyaadka ka danbeeysay fadeexda ka dhacday Garoonka Aadan Cade.
Halkaan ka aqriso qoraalada la is dhaafsaday